Izinto ezi-4 zokuDrayivu ezihola phambili nge-Marketing Automation | Martech Zone
Ucwaningo kusuka Ucwaningo lokuzenzakalela lwe-Venturebeat kukhombisa ukuthi, ngaphandle kokwehlukanisa izici zepulatifomu ngayinye, inselelo enkulu yokumaketha okuzenzakalelayo kwebhizinisi ukuqonda ukuthi ingena kanjani enhlanganweni yabo.
Mhlawumbe leyo yinkinga… izinkampani zizama ukulingana okuzenzakalelayo kokumaketha esikhundleni sokuthola ipulatifomu esivele ifana nezinqubo zabo zangaphakathi, amandla nezinsizakusebenza. Ngikhathele okuhle kwe uhlu lokuzenzekelayo lokumaketha noma izindlela ezi-quadrant Lapho senza ukukhetha kwabathengisi kumakhasimende ethu, sihlola zonke izici zenhlangano yabo ukuthola ipulatifomu elungile - noma isisombululo esifanele lapho amapulatifomu afanele angahlanganiswa khona. Kulula kakhulu ukwakha isixazululo kunokushintsha yonke inqubo namasiko enhlangano.
Lokho kusho, kusekhona ukuhola isizukulwane amathuba okutshalwa kwemali yesikhulumi sokuzenzekelayo sokumaketha. Nazi izinto ezi-4 i-TechnologyAdvice ezibonile ukuthi zishayela imiphumela yokukhiqiza okuholela:
Ukusebenzisana ne-Sales - kungenza ukwanda okungu-20% kumathuba wokuthengisa.
Imikhankaso Ye-imeyili Ye-Drip - i-imeyili inamathuba ama-3x okukhuthaza ukuthenga kunama-social media.
Amakhasi okufika - ukusebenzisa i-automation ngokuhlangana namakhasi okufika kungahle kube namazinga wokuguqulwa afike kuma-50%.
Ukwenza ngezifiso nokuhlolwa kwe-A / B - ama-imeyili enziwe aba ngewakho akhiqiza imali engu-6x uma iqhathaniswa nama-imeyili angawomuntu
Tags: ukuhlolwaimikhankaso yokudonsaimikhankaso yokudonsa nge-imeyiliamakhasi okufikaukuhola isizukulwaneukuzenzelaukusebenzisana ngokuthengisa